Olom-pirenena Nepaley miady amin’ny tsifisaziana amin’ny alalan’ny fanentanana “Hatezerana manoloana ny fanolanana” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2018 4:26 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, čeština , Ελληνικά, English
Fihetsiketseham-panoherana natao ho firaisankina miaraka amin'ny hetsika #JusticeForNirmala tao Maitighar Mandala, Kathmandu, Nepal. Sary avy amin'i Sanjib Chaudhary, nahazoana alalana.
Taorian'ny fanolanana sy famonoana mahatsiravina an'i Nirmala Panta, 13 taona tany atsimo andrefan'i Nepal tamin'ny faran'ny Jolay 2018, nanomboka ny fanentanana #RageAgainstRape ireo mponina Nepaley tafintohina, niteraka resadresaka manerana ny firenena mikasika ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ao Nepal izany.
Mihoatra ny fefy ny tsy rariny sy ny fampahoriana, voatery nidina an-dalambe izahay. Raha misy hetsi-panoherana manerana ny firenena ary mijanona mangina ny [tanànan'i] Pokhara, tsy hitranga izany. Androany dia niresaka hahazo ny rariny i Pokhara. Nanome fanantenana vaovao ity firaisankina ity. Niara-nitsangana ny olona.
Voalaza fa nankany amin'ny tranon'ny namany tao an-tanànan'i Kanchanpur i Nirmala mba hianatra saingy tsy niverina nody intsony ary hita faty tao anaty saha fambolena fary avy eo. Jiolahy 41 taona no voampanga ho nahavita ny heloka bevava, ary notanana natao fanadihadiana ihany koa ny vehivavy roa izay nipetraka tamin'ny trano notsidihin'i Nirmala talohan'io hariva io.
Nanatsoaka hevitra ny polisy fa “tsy salama saina” ilay lehilahy voarohirohy, ka nahasorena ireo olona teo an-toerana sy ny vondrona fiarahamonim-pirenena izany izay niampanga ny manampahefana ho miezaka manafina ny marina.
Any Nepal, tranga fanolanana telo no voatatitra isan'andro. Vao haingana ny polisy no namoaka tahiry milaza fa tranga fanolanana miisa 1.480 no notaterina tany Nepal tamin'ny taona 2017, efa ho avo roa heny ny isa tamin'ny taona 2016. Ahiana mbola ho ambony kokoa ny isa satria maro ireo tranga tsy nanaovana fitoriana.
Raha tsy mampatahotra anao ny tahiry navoaka, na mahatonga anao ho tezitra, inona no atao?
Nidina an-dalambe tao an-drenivohitra Kathmandu ireo mpikatroka miaraka amin'ny mpanohitra mba haneho ny hatezerany amin'ny fanjakana manoloana ny tranga fanolanana noho ny tsy fahampian'ny fepetra raisin'ny fanjakana mba hitondrana ny meloka eny amin'ny fitsarana. Nandritra ny fihetsiketsehana tamin'ny faran'ny Aogositra 2018, mpanao fihetsiketsehana iray no namoy ny ainy ary maro no naratra satria nampiasa hery ny polisy mba hifehy ny vahoaka.
Mitohy manerana ny firenena ireo hetsi-panoherana voarindra:
Misy olom-pirenena mivorivory ho an'ny #justiceforNirmala (ny rariny ho an'i Nirmala) manerana ny firenena. Miangavy anao mba ho avy eny amin'ny fihetsiketsehana akaiky anao.
Nandritra ny taona, niampanga ny governemanta ho tsy nandray fepetra ampy hanakanana ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ireo mpikatroka sy vondrona fiarahamonim-pirenena ary nanjaka tao amin'ny firenena ny hetsi-panoherana mitaky ny fisamborana ireo rehetra nahavanon-doza:
Misy foana isan'andro ny tatitra vaovao momba ny fanolanana! Mampiseho izany fa mitranga isan'andro ny fanolanana! Zavatra tsara ny fitomboan'ny fitoriana saingy tsy nihena ny isan'ny tranga fanolanana! Nahoana? Mampihoro-koditra anao ny taonan'ireo niharam-boina!
Ao Azia Atsimo fitondran-dehilahy, olana mila vahàna haingana ny fiarovana ny vehivavy, indrindra taorian'ny tranga manafintohina fanolanana tambabe sy famonoan'olona tany Delhi, India izay niteraka hetsi-panoherana goavana. Tezitra koa ny mponina tao Nepal mpifanolo-bodirindrina, izay mitovy amin'izany kolontsaina tsimatimanota.
Ny tena zava-misy amin'ny fitoriana fanolanana ao Nepal
Maro ny antony mahatonga ny olona lasibatry ny fanolanana misalasala hitatitra izany any Nepal. Ao anatin'ny tontolo ara-kolontsaina izay matetika omena tsiny ireo niharan-doza, dia tena mila herim-po goavana izany. Miatrika olana ara-pitsarana ho toy ny vato misakana ho amin'ny rariny ireo niharam-boina – matetika ela loatra ny fanadihadian'ny mpitandro filaminana ary ahemotra na amboamboarina ny valin'ny fitiliana ADN.
Tany am-piandohan'ny taona 2018, rehefa navotsotra ireo lehilahy Nepaley voarohirohy tamin'ny tranga fanolanana faobe mampihoro-koditra, nilaza ireo mpikatroka fa nisy ny tsy fahombiazan'ny rafi-pitsaràna izay tsy miraharaha ny tranga fanolanana na dia efa fantatra izao aza ireo nahavita heloka.
Mitranga amin'izao fotoana izao #RageAgainstRape
Mampiseho ampahibemaso ny feonay manohitra ny Fanolanana izahay androany- Mandrakitra ny fanentananay #RageAgainstRape izahay
Tao anatin'ny teritery, namoaka fehezan-dalàna vaovao manamafy ny lalàna mikasika ny herisetra mihatra amin'ny vehivavy ny governemanta Nepaley, anisan'izany ny sazy 25 taona an-tranomaizina noho ny fanolanana. Raha toa ka zaza tsy ampy taona, kilemaina na zokiolona ilay niharam-boina dia mety mahazo sazy mandrapaha-faty ny voampanga.
Saingy mbola mampisalasala ny fampiharana io lalàna io noho ny fenitra ara-kolotsaina sy ny halalin'ny kolikoly izay mamela ireo mpanao heloka bevava hirenireny an-kalalahana.
Raha mbola minia manaisotra ny “porofo” ireo mpanohana ny “lalàna sy ny porofo” ary tsy manana “fitokisana” na “fahavonana” na “fahatokisan-tena” ny komity mitady ny fahamarinana, ny hany fanantenako dia ny fiverenany mba hanondro ilay mpamono olona
Nandritra ny hetsi-panoherana, nifantohan'ny mpikatroka sasany manokana ny fanavaozana ny fitsarana ho fanomezam-boninahitra ireo niharam-pahavoazana izay mbola mijaly mangina.
Raha midina an-dalambe ny firenena manontolo mba hanome ny rariny manoloana ny heloka bevava mahatsiravina, inona no hitranga amin'ireo tovovavy izay mijaly am-pahanginana? Andeha hilalao politika tsy mahomby foana ve isika sa hanatsara ny rafi-pitsarantsika?
Nanampy tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity i Sanjib Chaudhary.